I-Best FB uchungechunge lwesigaba sesithathu sokuqhuma ubufakazi bokuhlanza umshini womsebenzi osindayo womkhiqizi kanye nefektri UMarcospa
Uchungechunge lwe-FB uchungechunge lwesithathu lokuqhuma kobufakazi bokuhlanza imboni esindayo
Isici ukuphepha nokuqhuma-okuthe xaxa, ukukhanya futhi okungabizi kakhulu kunamanye ama-vacuum wokuhlanza asindayo ezimbonini. Ilungele ukusebenza okuqhubekayo kwezindawo ezinokuqhuma kanye nothuli oluvuthayo noluyiziqhumane noma imishini yezimboni. Isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, ukucutshungulwa kwephepha lepulasitiki, ibhethri, ukusakaza, i-elekthronikhi, ukuphrinta kwe-3D nezinye izimboni.
Incazelo yalolu chungechunge lwe-FB lwesigaba sesithathu se-Explosion-proof Vacuum cleaner
Amapharamitha walolu chungechunge oluhle kakhulu lwe-FB lesigaba sesithathu se-Explosion-proof Vacuum cleaner
1. Imoto yokuqhuma, vimbela inhlansi kagesi yemoto
Uhlelo lwamandla lusebenzisa ifeni lomhlaba wonke eliphambili lokuqhuma ukuqhuma kwe-turbine fan (i-air pump), i-wide-voltage dual-frequency, ukuthembeka okuphezulu, umsindo ophansi, impilo ende nokusebenza okuqhubekayo kwamahora angama-24. Amandla atholakala kusuka ku-0.25kw kuye ku-4.0kw, ugesi ngu-380V / 50Hz.
ibanga eliqhuma ukuqhuma lemoto: Ex d-BT4 Gb
2. Isihlungi se-anti-static ukuvimbela izingozi ze-spark ezimile
Isikhwama sezinkanyezi ongasikhetha kanye nesihlungi se-cartridge sezinhlelo zokuhlunga.
Isihlungi sesikhwama sezinkanyezi sisebenzisa i-antistatic blended felt ukuthuthukisa ukuqhuba ngokungeza imicu kanambambili.
Isihlungi se-cartridge yesihlungi siphathwa nge-aluminized surface coating, enokusebenza okuhle kwe-antistatic nokumelana ebusweni ≤105Ω.
3. Ibhokisi likagesi elinobufakazi bokuqhuma ukuvimbela izingozi zikagesi
Uhlelo lokulawula lisebenzisa ibhokisi elinika amandla lokuqhuma, i-contactor yangaphakathi ye-AC kanye nokusebenzisa ngokweqile ukushisa okusetshenziswa kwezakhi zikagesi zeSchneider.
ibhokisi lokugesi elinobufakazi bokuqhuma, uphawu lokuqhuma: Ex d II BT4
4. Negative ingcindezi ukuqapha, yokuhlanza isikhumbuzi
Igeji yokucindezela engeyinhle iyisici sokumisa esijwayelekile somshini wonke. Yenzelwe ngokukhethekile ama-vacuum cleaner wezimboni kaPuhua. Okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu ngokulandelana kuhambelana nengcindezi yangaphakathi engemihle yomshini esigabeni ngasinye samandla. Isikhombi sikhomba endaweni ebomvu ukumela isihlungi sidinga ukuhlanzwa noma ukubuyiselwa.
5. Industrial casters, kulula ukuhambisa i-caster ye-Industrial kulula ukuyifaka.
Amasondo enziwe nge-top-grade polyurethane (PU), kubakaki bakhiwe ngamapuleti okucofa angu-2.5mm ukukhulisa izimbambo, kanti ama-casters angu-2-intshi angathwala u-50kg ngamunye. Ingaphezulu lesondo lenzelwe okusanhlamvu ukwenza ngcono ukusebenza kwe-anti-slip.
Hlukanisa imiphongolo engenhla nengezansi, okulula ukuyihlanza Isakhiwo sokuhlukanisa imiphongolo engenhla nesezansi ukumiswa okujwayelekile komshini, okuletha okulula kakhulu kumsebenzisi. Kuyinto elula ukuhlanza uthuli. Lapho kunesidingo sokuhlanza uthuli, kudingeka kuphela ukuphakamisa ibha yengcindezi, umgqomo oqoqa uthuli ngokwemvelo uwela phansi, bese uhambisa umgqomo., Ulahle uthuli, bese ucindezela ibha yengcindezi ngemuva kokuqeda.
7. Isiphepho ngaphakathi ukwehlisa umthwalo kusihlungi Isakhiwo sangaphakathi sesiphepho ukumiswa okujwayelekile komshini. Ifakwe ekuxhumaneni nechweba lokudonsa. Izinhlayiya ezinkulu zingaxazululwa ngqo ngaphansi kwebhakede lokuqoqa uthuli ngesihlukanisi sesiphepho. Akudingi ukuthi ibanjwe futhi ibhajwe ngesihlungi, esingakhuphula impilo yesihlungi.
8. I-interface ye-anti-static ne-hose I-hose kanye nesixhumi kwenziwa ngezinto ezilwa ne-static, ukuqhutshwa kukagesi kuhambisana ne-DIN53482, futhi ukumelana komhlaba kungu- <106Ω.
9. Isihlungi sisebenzisa ukushintshanisa ngesandla ukuhlanza uthuli, oluhle futhi olusebenzayo. Ukuhlanza uthuli olujikelezayo kuthatha imodi yesandla. Udinga kuphela ukushintshanisa isibambo esijikelezisayo ngokwewashi / esiphikisa iwashi cishe iminithi elilodwa ukuhlanza izinhlayiya ezinkulu zothuli ezinamathela ebusweni besihlungi.
Imodeli FB-22 FB-40
Amandla （Kw） 2.2 4
Amandla （V / Hz） 380/50 ~ 60
Ukuhamba komoya （m3 / h） 265 318
Umshini （mbar） 240 290
Ivolumu yethangi （L） 60
Umsindo dB （A） 72 ± 2 74 ± 2
Ukuhogela ububanzi （mm） 50
Hlunga indawo （m2） 3.5
Hlunga umthamo Isihlungi se-anti-static （0.3μm, 99.5%）
Hlanza ukuhlanza ngesandla phenduka
Ubukhulu （mm） 1220 * 565 * 1270
Isisindo （kg） 105 135
Langaphambilini I-A9 uchungechunge lwezimboni zokukhipha uthuli Heavy duty isigaba sesithathu sezinto zokuhlanza izimboni
Olandelayo: I-P3 uchungechunge ibhethri inika amandla i-vacuum cleaner yezimboni engenazintambo
T5 uchungechunge isigaba esisodwa emgqonyeni othuli extra ...
Imodeli abahlukahlukene Workshop Pre isihlukanisi umshini ma ...
P3 uchungechunge ibhethri inikwa amandla engenantambo v ezimbonini ...